वर्ष चार, अनशन नवौंवाट उब्जिएका यक्ष प्रश्नहरु ? | NewsMissile.com
News missile October 01, 2016 समाचार0Comment
डा. गोविन्द्र केसीले २०६९ साल असार २१ गते पहिलो पटक सत्याग्रहको आन्दोलन शुरु गरी नवौं पटकको आन्दोलन चरण २०७३ असोज १० गते बाट शुरु गरेका छन् । डा. केसीको आन्दोलन ४ बर्षको समयमा पटक पटक गरी ५९ दिनको भोक हडतामा के उपलब्धि भयो ? यक्ष प्रश्नको घेरामा नवौं पटकको आन्दोलन परेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । डा. केसीले अनशन सुरु गरेको समय देखि आजसम्म पनि माग पुरा गर्न नसकिने अवस्था भएको हो कि ? डा. केसीको हठ देखिएको हो ? देशको हरेक क्षेत्रमा बेथीति विकृति विसंगति भएको कुरामा कसैको दुई मत छैन ।
डा. सावको अनशनको नवौं संस्करण यतिवेला चलिरहँदा सरकारी पक्षबाट कुनै चासो देखाएको छैन किन ? विगतका अनशनमा एकबद्धता जनाउने माननीय गगन थापा यतिवेला स्वास्थ्थ मन्त्रीको पदमा आसीन हुनुहुन्छ। वहाँले डा.साबका मागको सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ वा सरकारको अरु संयन्त्रबाट मात्र मागको सम्बोधन सम्भव छ यस विषयको हेक्का स्वयम अनसन कर्तालाई होला नै। डा.सावको नवौं अनसनको माग ४ बुदाँमा समेटीएको छ ।
१. सरकार समक्ष चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन २. अदुअआ प्रमुख लोकमान सिह कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठक माथिको तत्काल महाभियोग ३. माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको कार्यन्वयन । पटक पटकका सम्झौता र ४. अघिल्लो पटक भएको सम्झौताको कार्यन्वयनका विषयमा अनशन असोज १० गते ४ बजेबाट शुरु भएको छ। यो आलेख तयार हँुदासम्म सरकारी निकायबाट कुनै चासो र चिन्ता व्यक्त भएको छैन ।
डा. सावको अनशन बस्न पाउने नैसैर्गिक अधिकारलाई कसैले हनन गर्न सक्दैन तर वहाँले अनशन गरिरहने शिक्षण अपस्तालको बातावरण कस्तो होला ? त्रि. वि .शिक्षण अपस्ताल महाराजगन्जको अवस्था दिन दिनै खराव हुदै गएको छ । गरिव जनताको अस्पष्टताको रुपमा रहेको अस्पताल परिसरमा अनशन बसेर डा. साबले तमासा देखाएको ४ बर्ष भएछ । यस विचमा कति नागरिकले उपचार नपाएको अवस्थाका बारेमा डा. साब के भनुहुन्छ ? आज सरकारी वा निजि शिक्षण अस्पताल महँगो भएको कारण हजारौ विद्यार्थी भारत लगाएतका देशमा अध्ययन गर्न जाँदा लाखौ खर्च भएको र देशको ठुलो धनराशी विदेशिएकोमा तपाईको धारण के हो ? तपाई आन्दोलन गरी रहने अनि आपूm डाक्टर भएपछि अरुलाई डाक्टर बन्न नदिने कालो षणयन्त्रको व्यापक चर्चाको बारेमा तपाई किन बोल्नुहुन ? आज मेडिकल क्षेत्रमा नक्कली डा.को विषयमा तपाई किन मौन हुनुन्छ ?
नागरिकको ज्यान जाने काममा लागेका यस्ता डा. हरुको र तपाईको के सम्बन्ध छ ? तपाईले आत्मा समिक्षा गर्ने समय आएकोछ ८ पटकको अनशनले के उपलब्धि भयो ? कुनै संचार माध्यममा तपाईले नभन्नुलाई जनताले के बुझने ? समस्याको केहि पनि समाधान नहुने अनशनको श्रृृंखला किन र कहिले सम्म ? मनमोहन कलेजको सवालमा तपाईको उत्तेरजान देख्दा त्यो अस्पताल खुलेमा सम्बन्धन पाएमा देश नै खतम होला जसरी किन कोलाहल गरेको ? जनताले सहकारीको माध्यमबाट स्थापन गर्न खोजेको अस्पताल प्रति तपाईको धारणाले के अब काठमाडौंमा अस्पताल खोल्नु नपर्ने अवस्था आएको हो ? त्यसो हो भने घण्टौ लाइन लागेर नागरिकले उपचार गर्नु पर्ने बाध्यताको बारेमा तपाईको बिश्लेषण के हो ?
सरकारसंग पटक पटक भएका सम्भौताको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने विषयमा सहमत हुँदाहँुदै पनि डा. साबको कडा हठ देख्दा उदेक लागेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकलाई तत्काल महाभियोग लगाउनु पर्ने विषय उठान त गर्न पाइन्छ लोकतन्त्रमा तर व्यवस्थापिका संसदको अधिकार क्षेत्रमा डा. सबाले अनुचित दवाव दिन मिल्ने कि नमिल्ने ? व्यवस्थापिका संसद सार्वभौम संस्था माथिको प्रहार हो कि होइन ? अधिकार को दुरुपयोग भएको हो भने ठोस प्रमाण सहित न्यायालयमा प्रवेश गर्ने कि अनशन बस्ने ? विधिको शासनलाई मान्ने हो भने केही पनि कानुन भन्दा माथि छैन अत अनशन होइन कानुनी उपचारको बाटोमा जानु राम्रो होला ।
आइओएममा डिन नियुक्ति सरकारको कार्य क्षेत्र भएकोले यस विषयमा ध्यानार्षण गराउनु राम्रो हो त्यहि तपाई कार्यरत अस्पतालको बेथिति डिन नियुक्तिले मात्र हो कि अरु पनि केहि छन ? तपाई कार्यरत संस्था संचालन हुने ऐन कानुनलाई तपाईले कति पालन गर्नु भएको छ ? ४ बर्षको समयमा ५९ दिन कार्यालयमा काम गर्नु भएन अनि सो समयको तलब लिनु भयो कि लिनु भएन ? जनतालाई जानकारी दिन सक्नुहुन्छ ?
विधिको शासनलाई मान्ने हो भने नेपाल स्वास्थ्थ सेवा ऐन २०५३ (संशोधन २०६६) मा स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धि कानुन रहेको छ । उसै ऐनको आधारमा डा. केसी पनि जागीरमा रहनु भएको होला यसै ऐनको परिधिका आधारमा नियुक्ति पदोन्नती लगायत भयो होला । यस ऐनको दफा ६१ ले प्रर्दशन र हडताल गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । दफा ६२ ले हडताल, थुनछेक तथा घेरा गर्नमा प्रतिबन्ध लगाएको सन्र्दभमा अस्पस्ताल हाता भित्रै अनशन बस्ने डा. साबलाई सरकारले के कार्यवाही गर्छ ? वा डाक्टरहरलाई यस ऐनले उन्मुत्ति दिएको छ ?
डा. साबको नवौं आन्दोलनको अन्त्य पनि केही दिन पछि कुनै नौलो तरीकाले अनशन तोडिने छ । अनि ठूला मिडिया हाउसले यति र उति उपलब्धि भएको चर्चा गर्ने छन् । फेरि केहि समय पछि १० औ संस्करणको अनशन हुनेछ ।
Previous यात्रुको जीउधनको सुरक्षा गर्ने कर्तब्य राज्यको भएको भन्दै मन्त्रालयले निकाले बिज्ञप्ती
Nextआज अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै